China XYS Free Dust Mobile Dry Grinder (Standard) mpanamboatra sy mpamatsy | Xieyanshi
Ny rafitra dia afaka miasa malefaka amin'ny toerana miasa. Ny rafitry ny fitaovana iray manontolo dia miorina amin'ny mpanadio vovoka - izay manana marika malaza eropeana malaza. Azonao atao ny mametraka fitaovana amin'ny mpanadio, toy ny taratasy fasika, sanders ary fitaovana hafa.
Izy io dia azo ampiarahina amin'ny fikolokoloana herinaratra sy ny seranana fitotoana rivotra, sanders isan-tsokona / elektrika isan-karazany ho safidy.
Ny vokatray dia manararaotra amin'ny fampiasana fitrandrahana vovoka matihanina mba ana-poloney, izay afaka manatsara ny endrika sy ny birghter. Ohatra, rehefa mandeha ilay mpitrandraka vovoka dia ao anaty tontolo madio sy milamina ny fiara. Izy io dia afaka manamboatra ny vatan'ny fiara voadona, izay afaka manosotra sy manefy mandoko ilay fiara simba ary manao ilay vatana simba ho malama toy ny vaovao.
1.Streamlines, endrika matihanina, fivezivezena milamina mandritra ny fiasa, mety kokoa ampiasaina
2.Imported moto matihanina mavitrika, milina azo antoka ary maharitra matevina 3.control automatique unit, ny asan'ny miasa dia azo aseho eo amin'ny efijery, ary ny fampisehoana dia milamina.
4. Mety amin'ny vovoka Class L
5. Fahaiza-mitrandraka mahery ary tsy fandotoana vovoka
Marbra Terrazo Wet Dry Grinder Stone Fixing Gloss Polishing Grinding Mobile Concrete Machine, ny savaivony 500mm, no habe kely indrindra eo amin'ireo andian-tsarin'ny rafitra planeta. Mihodina mankany amin'ny lalana samihafa ny takelaka planeta, izay mampitombo ny fahombiazan'ny asa.
Ny rafitra dia mamela mpiasa roa hiasa amin'ny fotoana iray.
Ampiasaina indrindra amin'ny atrikasa vy sy ny fanesorana loko, ny fikolokoloana volom-borona voalohany.
Previous: Takelaka famolavolana taratasy fanosotra lena sy maina
Manaraka: Amboaram-basy hosodoko azo alefa
XYS maimaim-poana vovoka finday maina (ara-toekarena)